ဒီဇယ် အင်ဂျင်တွေ တိုးတက်ဖန်တီးမယ့် အပိုင်းကို လက်လျှော့လိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ Hyundai ! – MyMedia Myanmar
ဒီဇယ် အင်ဂျင်တွေ တိုးတက်ဖန်တီးမယ့် အပိုင်းကို လက်လျှော့လိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ Hyundai !
ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ကားထုတ်လုပ်ရေး လောကကြီး တစ်ခုလုံးဟာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သုံးတဲ့ ဘက်ကို ကူးပြောင်းနေပြီ ဖြစ်သလို အခု လို ကူးပြောင်းဖို့ အတွက်ကိုလည်း ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချရေး ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းအသစ် တွေက တွန်းအားပေးလို့နေတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အကျိုးဆက် အနေနဲ့ ဒီဇယ် အင်ဂျင် တွေဟာ မျိုးဆက် ပြတ် ပျောက်ကွယ် သွားရတော့မယ့် အရေး ကို ကြုံ နေရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Volkswagen Group ရဲ့ Dieselgate လို့ ခေါ်တွင်တဲ့ အကျိုး သက်ရောက်မှုကို တွက်ချက်အပြီးမှာ ဓာတ်ဆီ ၊ ဒီဇယ်တွေကို အသုံးပြုမှု ကျရိပ်သမ်းလာနေပြီ ဖြစ်ပြီး အခုထိတော့ ဥရောပရဲ့ အချို့ နေရာတွေမှာ နေရာရထားဆဲ ဖြစ်ပေမယ့် တကယ် တမ်း သုံးသပ်ချက်တွေ အရတော့ Hybrid နဲ့ လျှပ်စစ်ကား သီးသန့်တွေဟာ ဒီဇယ် ကားတွေရဲ့ ရောင်းအား ထက်တော့ သာလွန်လာ ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အကြောင်းခြင်းရာတွေ ကြောင့်ပဲ Hyundai ဟာ သူတို့ရဲ့ ဒီဇယ် အင်ဂျင်အသစ်တွေ ဖန်တီးတဲ့အပိုင်းကို လက်လျှော့ပြီး ဆက်လက် မထုတ်လုပ် တော့ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားသိရ အပြီးမှာ သိပ်ပြီး အံ့အားသင့်စရာ မရှိဘူးလို့ပဲ ဆိုလို့ ရသွားပါ တယ်။ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ စက်ရုံ နည်းပညာ သတင်းပိုင်းတွေနဲ့ ပြည်တွင်းသတင်း တစ်ချို့ဖြစ်တဲ့ Korea JoongAng Daily အရတော့ Hyundai ဟာ ဒီဇယ် အင်ဂျင် တွေ တိုးတက် ထုတ်လုပ်နေမှုကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ဒုတိယနှစ်ဝက် လောက်ကတည်းက ရပ် ဆိုင်းထားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ် ဒီဇယ် အင်ဂျင်တွေကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိတော့ပေမယ့် အခု လက်ရှိ ရှိထားပြီးသား အင်ဂျင်တွေ ကိုတော့ လာမယ့် နှစ် အနည်းငယ် လောက် အထိ အဆင့်မြှင့်တင် မှုတွေ ပြုလုပ် ပေးနေဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နည်းဆိုရရင်တော့ Hyundai ဟာ သူတို့ရဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေကို လုံးဝကြီးဖယ်မထုတ်လိုက် သေးခင် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ် ခုတော့ ပြင်ဆင် ချိန် ပေးထားဦးမယ့် သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Gasoline Engine တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ အခုလိုမျိုး စိတ်ပူပန်စရာ အခြေအနေတွေ ဖြစ်နေ တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း မှာပဲ Hyundai ဟာ Hybrid နဲ့ Plug-In Hybrid တွေကိုပါ လာမယ့်နှစ် တွေပါ ဆက်လက်ချိန်ညှိ တိုးမြှင့်ဖို့အတွက် စီစဉ် လာတော့မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက် တည်းမှာပဲ Gasoline Engine တွေ ဟာလည်း တ ကယ်တော့ အတော်လေးကို အသုံးများပြီး လူကြိုက်များတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေသေးတာ ဖြစ်တာကြောင့် ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ အင် ဂျင်နီယာတွေကလည်း ဒီ အခြေအနေမှာပဲအင်ဂျင် တွေရဲ့ နောက်ဆုံး နေ့ရက်တွေ အထိတိုင် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနိုင် အောင် ကြိုးစား နေဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Euro ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း7ချက် ကလည်း အခု လာမယ့် ဆယ်စုနှစ် တစ်ဝက် လောက်မှာ တင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလာနိုင်တာ ကြောင့် Old Continent ပေါ်မှာရှိတဲ့ ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အများစုဟာ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာတွေ ကို အဆိုပါ အချိန်မတိုင်မီ ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ ဖန်တီးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်း မှာပဲ ကုမ္ပဏီ တွေဟာ ဆက်လက် ရှင်သန် ပြောင်းလဲ ရမယ့်လျှပ်စစ်ကား တစ်ခေတ် အတွက်လည်း အပြိုင်အဆိုင် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင် နေကြပြီ ဖြစ်ပြီး Combustion Engine တွေ မပါဝင်တော့မယ့် ကားတွေရဲ့ လောက အသစ် အတွက်လည်း ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုတွေကြီးကြီး မားမားကို ပြုလုပ်နေကြပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Hyundai အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံး သီးသန့်ကား အမျိုးအစား ၂၃ မျိုးကို လာမယ့် ၂၀၂၅ မတိုင်ခင် ရောင်းချ နိုင်ဖို့ စီမံ ကိန်း ချ ကြိုးစားနေတာ လည်း ဖြစ်ကာ အခု ဆိုရင်တော့ Ioniq5ကိုလည်း အဆိုပါ ကားသစ်တွေရဲ့ မှတ်တမ်း အစအဖြစ် နောက်လ မှာ စတင် ချပြလာတော့မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် တောင်ကိုရီးယား ကားကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Kia ကလည်း အခုအချိန် က တည်း က အကြိုပြသမှုတွေ နဲ့ အတူ ကာဗွန် ထုတ်လုပ်မှု လုံးဝ မရှိမယ့် ခေတ်တစ်ခု ကို ခြေလှမ်း စတင် နေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ထပ် ဇိမ်ခံ ကား ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Genesis အနေနဲ့ကလည်း သူတို့ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး Bandwagon အမျိုးအစားကို မရှေးမနှောင်းမှာပဲ ချပြသွားမယ်လို့ ဆိုထားတာကြောင့် လျှပ်စစ်ကားတွေရဲ့ အနာဂါတ် ကတော့ အတော်လေး တောက်ပလာ နေပြီလို့ ပဲ ဆိုရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ဒီဇယ် အင်ဂျင်တွေ တိုးတက်ဖန်တီးမယ့် အပိုင်းကို လက်လျှော့လိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ Hyundai ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-16T20:30:35+06:30January 16th, 2021|MYCARS MYANMAR|